Dhacdo Wareedyadii Ugu Mudnaa 2012 | Somaliland.Org
Dhacdo Wareedyadii Ugu Mudnaa 2012
January 13, 2013	Faaqidaad Xassan Cumar Horri
Qaybta 8aad : Geeridii Ra’iisal Wasaare Males Zanawi iyo Raadkii Uu Ka Tegay
Dib-U-Cugashadii Barack Obama- Doorasho iyo Dhacdadii Ugu Shislayd 2012, Gu’ga Carabta iyo Saamaynta Islaamiyiinat, Guga Carabta- Masar oo Qarka U saaran Burbur Siyaasadeed, Somaaliland- Doorashada G. Degaanka Guul iyo Dhaliilaha Tubta Dimuqraadiyadda, Somaaliya- Dawlad Ann Ku Meelgaadh Ahayn iyo Ambabaxa Al-Shabaab, Madaxweyne Aan Tudhayn iyo Kacdoon Burbur Horseeday, Kenya- Qaraxyo Isa Soo Taraya iyo Doorashada Ku Soo Fool Leh, Geeridii Ra’iisal Wasaare Males Zanawi iyo Raadkii Uu Ka Tegay, Waayaha Falastiin- Duruufaha Adag iyo Yididiilada Soo Bidhaamaysa, Itoobiya- Geeridii Ra’iisal Wasaare Males Zanawi iyo Raadkii Uu Ka Tegay, Maali- Dawaariqa iyo Ururka Al-Qaacida Oo Ku Habsaday Waqooyiga Dalka, Britain- London Oo Si Qurxoon U Martigelisay Tartankii Olympic 2012, Kuuriyada Waqooyi- Gantaal Lama filaan Ah Oo Si Guul Ah U Ambabaxay, Maraykan: Caruur Lagu toogtay Dugsiga Newtown iyo Sharciga Hub-Haysashada.
Atto Meles Zanawi, Ra’iisal Wasaarahii hore ee dalka Ethiopia (1991-2012), waxaa uu ke tegay sooyaal (legacy) sii jiri doono muddo dheer. Waxaa uu ahaa indheergarad la diriray baahida dalkiisa ka jirtay iyo argagaxisada caalamka. Isla markaa, waxaa dad badan u arkayeen in uu ahaa keligii teliye aan laga daba hadlin kaas oo bulshada caalamka iyo kuwa u ololeeya dimuqraadiyadda ay ka aamuseen falxumooyinka uu ku kacay iyaga oo ka dhex arkay danahooda. Sidoo kale, waxgarad fara badan ayaa aaminsan in aanu wax badan qabteen haddii aanu adeegsan dhengadda uu wax ku kala socod siin jiray.
Waxaa uu galay dagaalkii Eritrea xilli ay ugu muuqatay in uu ku qasban yahay. Haddii uu mucaaradka iyo saxaafadda afka gacanta ka saaray, iyo haddii uu ficiltan ugu badheedhay Masar si la isu la meel dhigo xakamaynta qulqulka biyaha Nile. Dhammaanteed waxay ahaayeen hawl uu qabtay Zenawi. Waxaa uu ahaa xiddiggii la dagaalanka argagaxisada ee danjiraha u ahaa dunida reer galbeedka. Waxaa lagu xusuusan doonaa kaalinta uu ka qaatay horumarinta dhaqaale, waxaana sii socon doona, sida muuqata, sooyaalkii uu ka tegay.
“Zenawi waxaa uu ahaa nin qallafsan, isla markaana aad u sarreyo garaadkiisu,” sidaa waxa BBC-da u sheegtay Madaxweynaha Liberia Johnson Sirleaf. Dhinaca kale, Madaxweynaha Uganda waxaa laga sheegay inuu ciidamadiisa ugu diray Somaaliya si uu gacan u siiyo saaxiibkiis Zenawi.
1991, Meles Zenawi, waxaa uu talada ku qabsaday halgan hubaysan oo uu ku tuuray Mengeste Haile Mariam. Dagaalkaa waxaa ku dhintay boqolaal kun oo naftooda u hibeeyay isbedel dalk ka dhaca. Zenawi, waxaa uu ahaa nin aan qoslin ama dhoola caddayn, nin adag iyo geesi aan libiqsan. Waxaa uu tuuray buugga isagoo ka tegay waxbarashada Jaamicadda Caafimaadka. Qoriga ayuu ka jeclaystay waxbarashada mana uu dhigin ilaa uu ku fadhiistay kursiga dalka looga arrimiyo.
Meles, 57 jir, waxaa uu dalka ka talinayay muddo 21 sannadood isagoo ku maamulayay gacan bir ah. Waxaa uu ahaa saxiib dhow oo xidhiidh fiican la lahaa dawladda Maraykanka, kana haystay taageero weyn oo dhinaca dhaqaalaha oo uu ku mutaystay dirirtii qadhaadheed ee uu ku la jiray argagaxisada. Hase ahaatee, waxaa lagu eedeeyaa in uu ahaa nin aan danahiisa uga laaban wax kasta oo carqalad ku noqon kara. Waxaa uu cagta mariyay raggii ay siyaasadda ku loolamayeen, saxaafadda iyo ururada Islaamiga ah ee uu u arkay in ay turunturo ku yahiin geeddi-socodka siyaasadiisa aan jixinjixa lahayn.
1995 waxaa uu noqday Ra’iisal Wasaare isaga oo jagada Madaxweynaha u banneeyay Qoomiyadda Uromo oo dalka ugu tiro badan. Ogow, xilka Madaxweyne waxaa uu ku kooban yahay hoggaan sharafeed, waxaana taladu gacanta ugu jirtaa Ra’iisal Wasaaraha. Zenawi. Waxaa u qorshaysnayd in uu xilka ka dego sannadka 2015.
Somaaliya waxaa uu geliyay guluf iyo ciidan gaadhayay ilaa 10,000 isagoo gabbood ka dhigtay in uu gacan siinayay xukuumadahii KMG. In kasta oo la sheegay in ciidanka Ethiopia uu ka baxay Somaaliya, haddana sida laga warqabo, mar kasta oo ay soo muuqato halis ku soo fool leh, si toos ah iyo fasax la’aan ayaa ciidanku u soo rogaal celin karaan. Ethiopia waxaa ay saamayn weyn ku yeelatay siyaasadda iyo nabadgelyada Geeska.
Marka laga hadlayo sooyaalkii Zenawi, muranku waxaa uu dhex taagan yahay laba argtiyood oo aad u kala fog. Argatida hore waxay tilmaamaysaa in uu ka tegay dad iyo gobolo aad u kala fogaaday. Waxaana adkaan doonta, siday ay qabaan, qaabkii dalka dib loogu midayn lahaa. Gobolada qaarkood, sida gobolka uu ka soo jeedo, Tigrey, waxaa lagu sheegay in uu gaadhsiiyay horumar aan la tirokoobi kaarayn, halka gobolada qaarkoodna loo haysto inuu hoos u gaadhsiiyay macaluul, quus iyo dib-u-dhac aan laga soo kabasan karayn. Aragtidan waxaa ay sheegaysaa in uu ahaa nin muuqaal dhalanteed ah isu tusa adduunka intiisa kale, halka uu dalkiisa ugu muuqday keli-taliye gacan bir ah ku qabtay taladii, dhaqaalahii iyo dheeftii dalka. Aragtida kale waxay caddaynaysaa Meles Zenawi in uu ka tegay dal dhisan oo ku tallaabsaday horumar uu kaga dheereeyay Afrikada inteeda badan. Dalalka hore-u-maray sida (Maraykan iyo Yurub) goor ay u caal waayeen maaraynta dhaqaalaha, iyo xilli USA, Greece, Spain, Portugal, Italy, France iyo dal badan laga tumayo durbaanka dibad-bax, shaqo-la’aan, daryeel xumo iyo burbur dhaqaale, Zenawi waxaa laga dhaxlay koboc dhaqaale oo ku socda, kuna sii socon doono 10%. Tirsigaa maanta ma haweysan karaan dalalka waaweyn. Magaca Zenawi iyo waxqabadkiisa waxaa ka marag kacay qoraalada dad odhaahdooda laga dhegaysto fagaarayaasha dunida sida Susan Rice, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Donald Levine, Nancy Polesi iyo xildhibaanka Senator James Inhofe iyo in kale oo ka sii badan.
Si kastaba ha ahaatee, Ethiopia iyo Afrika waxaa ka baxay nin culus. Aaskiisa waxaa ka soo qayb galay boqolaal madax ah oo ka socday dacalada dunida.
Eray uu aaska ka jeediyay Mudane Jacob Zuma, Madaxweynaha K. Afrika, waxaa uu ku sheegay Ethiopia in uu ka baxay “Muwaadin aragti fog lahaa.” Madaxweynaha Rwanada, Mudane Paul Kagame isaguna waxa uu ku sheegay, “noloshiisa waxaa uu ku dhammaystay geesinimo aan gabbasho aqoon, waxaana uu lahaa aragti fog oo uu ku maareeyay horumarka dalkiisa iyo guud ahaan qaaradda Afrika.”
Ergada Maraykanka ee aaska ka soo qayb gashay waxaa hoggaaminaysay Marwo Susan Rice, Danjiraha U.S. ee Qaramada Midoobay, isla markaa, Madaxweyne Obama ku magacaabay maqaamka wasiirnimo. Marwo Susan Rice waxaa ay Meles ku tilmaamtay, “nin aan isla-weynayn oo toos wax u abbaara.”
Ra’iisal Wasaarahii hore ee Etiopia, Atto Males Zanawi, 20kii August waxaa uu ku qudh-baxay cisbitaal ku yaalla Brussels, dalka Belgium. Kumanyaal baroor-diiq ah ayaa ku sugnaa Fagaaraha Ummadda ee Addis Ababa, caasimadda Ethiopia. Males, waxaa amaan fara badan looga soo jeediyay aaska korkiisa isaga oo lagu sheegay “masuul dadkiisa ka la baxsaday saboolnimo iyo macaluul dalkiisu ku caanbaxay”. Ethiopia waxaa ay ka mid tahay 10ka dal ee dunida ugu horreeya kobaca dhaqaalaha.
Geerida Zenawi, Ethiopia, waxaa ay u ahayd 2 toddobaad oo si rasmi ah looga baroor-diiqayo. Tan iyo markii la baahiyay geerida, waxaa jid kasta lagu teeday sawirro, hal-ku-dhegyo iyo muuqaalo lagu xuso, laguna maamusay halyay ummadda ka baxay. Aaska waxaa uu ku qabsoomay Fagaaraha Meskel, waxaana maydka loo sii walwaalay Kiniisada Holy Trinity Cathedral, halkaasoo lagu soo gebogebeeyay qorshahii aaska. Waxaa kale oo iyaguna ka qayb galay, aaska, wafdi uu hoggaaminayo Madaxweynaha Somaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud “Siilaanyo”, Madaxweynahii Somaaliya iyo Madaxweyne Goboleedka Puntland.
Ku-xigeenkii Zenawi. isla markaana ahaa Wasiirka Arrimaha Dibedda, Hailemariam Desalegn ayaa dhaxlay xilkii isagoo shil la’aan dhammaysan doona mudada xilka oo ku eg 2015. “Hoggaamiyahii weynaa Meles Zenawi waxaa uu ahaa qofkii dejiyay siyaasadda dib loogu soo noolaynayo dalkeenna. Waxaa uu ku guulaystay in uu dalka u horseedo horukac dhaqaale oo 8dii sannadood oo u danbeeyay gaadhay laba khaanadood (10%).” Sidaa waxaa aaska korkiisa ka sheegay Ra’iisal Wasaaraha cusub Mudane Hailemariam.” Waxaana uu hadalkiisa ku ladhay in xukuumadiisu halkii ka sii ambaqaadi doonto siyaasaddii uu ka tegay Zenawi.
Sidaa darteed, soyaalkii Meles Zenawi waxaa uu ahaan doonaa mid ku sii socda Ethiopia iyo Geeska Afrikaba.
Previous PostBadhasaabka Togdheer Oo Kulan La Yeeshay Jaaliyada Somaliland ee ku Dhaqan BirminghamNext PostXusni Mubaarig oo dib Loo Maxkamadeynayo	Blog